Hudheelka caalamiga ah ee Trump ee Washington, DC oo la iibiyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Hudheelka caalamiga ah ee Trump ee Washington, DC oo la iibiyay
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Hudheelka caalamiga ah ee Trump ee Washington, DC oo la iibiyay.
Inkastoo Trump uu been abuur ku sheegay in uu soo galiyay ku dhawaad ​​150 milyan oo dollar intii uu xilka hayay, haddana dukumentiyada dowladda ayaa muujinaya hantida uu lunsaday madaxweynihii hore in ka badan 70 milyan oo doolar.
Hotelka caalamiga ah ee Trump waxa uu ku yaalaa dhismo taariikhi ah oo qarni jirsaday oo ku yaala badhtamaha magaalada Washington.
Dhismahan taariikhiga ah waxaa iska leh dowladda Mareykanka laakiin waxaa la kireyn karaa ilaa 100 sano.
Shirkadda maalgashiga ee fadhigeedu yahay Miami ee CGI Merchant Group ayaa qorshaynaysa inay magaca Trump ka saarto guriga oo ay ku calaamadiso astaanta Hilton ee Waldorf Astoria.
Shirkadda maalgashiga ee fadhigeedu yahay Miami ee CGI Merchant Group ayaa iibsatay xuquuqaha Hoteelka caalamiga ah ee Trump oo ku yaal dhismo taariikhi ah oo qarni jir ah oo ku yaal badhtamaha magaalada Washington, DC
Hoteelka caalamiga ah ee Trump waxa uu ku yaalaa dhawr baloog oo Aqalka Cad ah waxana uu degan yahay dhismo taariikhi ah oo ay leedahay dawlada Maraykanka balse la kireysan karo ilaa 100 sano.
Hoteelka oo caan ku noqday Trump taageerayaasha ayaa sheegay in ay keenaan khasaare ka badan faa'iido sannadihii la soo dhaafay.
Inkastoo ay TrumpWarar been abuur ah oo sheegaya in hotelka uu keenay lacag dhan 150 milyan oo dollar mudadii uu xilka hayay, dukumentiyada dowlada ayaa muujinaya hantida uu lunsaday madaxweynihii hore in ka badan 70 milyan oo dollar.
Guddi korjoogto ah oo ka tirsan Congress-ka ayaa sidoo kale ogaaday in hoteelka uu ka helay lacag ku dhow 3.7 milyan oo doolar oo ay bixiyeen dowlado shisheeye, taasoo loo arki karo mid ka dhalan karta danaha.
Si kastaba ha ahaatee, xuquuqda hoteelka ayaa hadda u keeni doonta $375 milyan shirkadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Iibsaduhu waa shirkadda maalgashiga ee fadhigeedu yahay Miami ee CGI Merchant Group, taas oo qorshaynaysa in magaca Trump laga saaro guriga oo ay maamusho oo ay calaamadiso kooxda Hilton ee Waldorf Astoria.